CABBIRAADDA UBAXYADA OO DHAN: DARYEELKA GURIGA, SAWIR DHIRTA OO LEH SHARRAXAAD, BEERITAANKA, CUDURRADA IYO CAYAYAANKA, IYO SABABTA AYSAN UJIRIN - SABABAHA SUURTOGALKA AH - GURI, GURI
Xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka ee ubadka ee ubaxa at home iyo beerto, sharaxaad iyo sawir dhirta
Abuuritaanka ubax-abuurka ah waxaa lagu jeclaan doonaa dhammaan kuwa dhirta ugu yaraan hal mar quruxda, isafgaradka, fududaada daryeelka, iyo, dabcan, ubax joogto ah, oo faraxsanaan leh rabsho midabyo.
Kama qabin daryeelka iyo taranka, abidna ubax, oo u adkeysanaya waxyaabo waxyeelo leh. Cunto noocan oo kale ah ee windowsill ayaa ku farxi doona xitaa maalinta gloomiest.
Maqaalkani wuxuu faahfaahin ka bixinayaa xeerarka asaasiga ah ee daryeelka caafimaad ee ubadka ee ubaxyada ee guriga iyo beertiisa, sharaxaad iyo sawir geedka.
Maxuu dooranayaa dhirta?
Heerkulka iyo iftiinka.
Heerkulka hawada ee xagaaga iyo xilliga jiilaalka waa in uu ahaado 20-25 degrees Celsius. Xilliga diirran looma ogola in ay ku badan yihiin caleemaha iyo afkoda, iyo cimilada qaboobaha nidaamka asaasiga ah waa in laga ilaaliyo in ka badan. Si bloom sanadka oo dhan, dhirta u baahan tahay maalin iftiin ah ugu yaraan 16 saacadood. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro maalinti kulul waxaad u baahan tahay pritenyat begonia si looga fogaado cawaaqib xun.
Baahida loo qabo curonia weligiis ubax, qoyaan badan sababta oo ah asalkeeda tropical. Si kastaba ha noqotee, in ka badan oo la buufiyo leh buufin badani waa mid aan macquul ahayn, waxay dhaawici kartaa geedka - tani waxaa lagu fahmi karaa dhibco madow oo ay ku dabooli doonto xaaladdan oo kale. Xalka ugu fiican waa in la abuuro ilo macmal ah oo qoyaan ah.
Haddii aysan jirin huur-koronto koronto ah oo guriga lagu dhajin karo meel u dhow dhirta, markaa waxaad dhisi kartaa naqshad ku habboon baahida ubaxa ee qoyaanka. On digsi madhan, waa inaad xajisaa dheriga cabbirka yar. Ku shub qashin ama dhoobo dhoobo ah meelaha bannaan ee sariirta. Dheriga waxaad u baahan tahay inaad dhar qabatid.
Si joogto ah u qulqulaya lakabka dheecaanka, biyaha kaas oo uumi uumi doona meel u dhow dhirta, waxay qancin kartaa baahida qoyaanka sare. Haddii aadan bixin tan, ka dibna sifooyinka qurxinta ee ubaxa hoos u dhigi doonaa - talooyinka caleemaha qallajin doonaa iyo curl.
Begonia waa mid ka mid ah ubaxyadaas oo badiyaa isbeddelka dheriga uu yahay mid walaac badan wuxuuna noqon karaa waxyeello. Sidaa daraadeed, waxaad u baahan tahay inaad qaadato talaabo masuul ah oo ku saabsan doorashada xulashada iyo tixgelinta xaqiiqda ah in begonia jeceshahay meelo badan oo bilaash ah, waxayna ubaahan tahay meel.
Halkan waxaad ka arki kartaa sawirada ubadka begonias ubax:
Beerto iyo gawaadhida
Waxaa la doorbidi karaa in ay degto waqti marka saacadaha iftiinka maalinlaha ah uu noqon doono muddo dheer - laga bilaabo Maarso.
Ka hor intaadan beeran waa muhiim in la doorto weelka saxda ah. Waxaa habboon in la tixgeliyo in xididdada dhirta ay ku koraan dusha sare, sidaas daraadeed waxa fiican in la qaato awooda gacmeed, laakiin waa ballaaran. Waa inay god ku leedahay daloolka.
Waxaad dhigtaa lakabka dheecaan ee dhoobo ama dhagaxyada hoose ee taangiga.
Shub carrada, jiifay xididada, kula saydhaa ciidda haray si aad u hesho.
Waxaad dhali kartaa dhir kala duwan hal weel, xaalad kaliya waa fogaan ah 10x10 cm midba midka kale.
Biyaha si joogto ah si ciidda oo dhan u qoyaan.
Transplanting waa qayb qasab ah oo lagu daryeelo dhirta, sababtoo ah nidaamka asalka ah ee begonias si firfircoon ayuu u kobcayaa. Fahmaan goorta loo baahdo in loo bedelo, marka xididdada ubaxa ahi ay muuqan doonaan godka dufanka. Doorashada weel cusub, waxaad u baahan tahay inaad xusuusto xididada, kuwaas oo badanaaba koraan.
Dib u soo celinta geedka waxaa lagu talinayaa oo kaliya guga hore, iyada oo aysan jirin koritaan firfircoon.
Si taxaddar leh uga saar geedka shaashadda hore.
Nadiifi nidaamka xididka ee hadhaaga dhulka.
Diyaarso xal daciif ah ee daloolka potassium, iyo hoos u xididada dhirta waxaa jira 30 daqiiqo.
Iska yaree xididdada caleemaha, inta kale ee raaci biyo biyo ah.
Caleemaha la qalajiyey si ay u abuuraan sida waafaqsan nidaamka beeritaanka kor ku xusan.
Maalmaha ugu horeeya ee tallaalka ka dib waxay u baahan tahay waraabin badan.
Dhirta dhirta ah ee bilawday in ay lumiso saamaynteeda qurxinta, soo saaro qaybaha hoose ee afkoda, ma jiraan wax macno ah ee dib u celinta, ku-tallaaliddu ma soo celinayso saameynta qurxinta ee ubaxa.
Kaga baxa guriga
Waraabinta iyo quudinta.
Waraabinta dhirta ayaa loo soo saaray sidii loo baahdo. Haddii ciidda qalajiyey 1.5 cm, ka dibna ubaxa u baahan yahay waraabinta. Biyaha waa in ay ahaadaan heerkulka qolka oo kala tagaan. Wax badan oo muhiim u ah koritaanka fiican ee begonia qulqulaya waa dayactirka joogto ah ee qoyaan sare. Ujeedada ugu weyn ee waraabinta waa in laga hortago dhulka iyo xididdada dhirta laga bilaabo qalajinta, laakiin sidoo kale si looga fogaado joogitaanka qoyaanka ee ciidda.
Bacriminta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeellida aaladda dhirta. Inta lagu jiro muddada abuurka ugxan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu quudiyo dhirta leh Bacriminta fosfat-potassium, iyo sii dheereeya Bacriminta gaarka ah ee Bacriminta dareeraha dareeraha for dalagyada ubax.
Inkasta oo noocyada noocan ah, sida caadiga ah, aysan koraan 40 cm, manjooyin ayaa mararka qaarkood lagama maarmaan u tahay in ubax la siiyo, si fiican loo eego. Haddii geedka uu bilaabo inuu si kedis ah ugudbiyo oo aan cidhiidhi ahayn, sare ee afkoda waxaa laga saari karaa dheer, iyo kuwa ku dhow salka, gaaban. Sidaas begonias ayaa lagu soo koobay.
Wixii ubax joogta ah ee xilliga jiilaalka, iftiinka isku midka ah iyo xaaladaha heerkulka waa in la fiiriyaa sida wakhtiga intiisa kale. Haddii tani ay ku guuldareysato, markaa waxaad ubaahan tahay inaad siiso dhirta nasasho nasasho: u wareeji weelka oo leh meeshaan qabow, laakiin aan ka yarayn 12 darajo Celsius - tani waa heerka ugu hooseeya, heerkulku kama badbaado dhirta qaboobaha; yaree tirada biyaha; yaree xaddiga bacriminta.
Si aad u ogaatid sida loo daryeelo noocyo kala duwan oo bilowga-ubax dhashay - Terry, iyo sidoo kale xeerarka sii kordhaya ee guriga iyo waddada, akhriso maqaalkan.
Waa in la ogaadaa in dhirta la iibsaday ay tahay inay marka hore la qabsadaan xaaladaha cusub oo kaliya markaa waxaa suurtogal ah in la sameeyo xubin kaabis ah. Sidoo kale haddii dhirta la gadanayo ee la iibsado, ka dibna lama beddeli karo; waa lagama maarmaan in la sugo si loo fiiqo.
Markaad sameyneyso xubin kaabis ah, waxaad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u sameyso xididada, waxyeellada ugu yar ee keeni karta in la gooyo. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad si taxadar leh u doorato carrada ku habboon, waxaad labadiinaba iibsan kartaan naftaada. Waa inay ahaataa:
1/2 dhul caleen ah;
1 2 xabo ama humus.
Tan iyo marka ciidda isku dhafan ay noqoto mid cufan, qadar yar oo ciid ah waa in la dhigaa hoose ee taangiga. Ka dib marka la isu tallaalayo, dhirta waxay u baahan tahay daryeel iyo tayo wanaagsan.
Cayayaanka iyo cudurada suurtagalka ah
Haddii dhirta ay kororto, caleemaha cufan, koritaankeedu wuxuu hoos u dhacayaa ama joojiyaa wadajir, taas macnaheedu waa aphid iyo / ama caarada caarada, oo ku quudiya juice begonia, ayaa bilaabay on.
Si aad uga takhaluso aphids, waxaad samayn kartaa geeddi-socodka Aktellik saddex jeer at bareeg ah oo ku saabsan 10 maalmood. Derris ama ku dhawaad ​​cayayaanka kale ee insectoacaricide waxay ku haboonaan doonaan burburinta caarada caarada.
Xaaladda muuqaalka nematodes, begonia si ay u badbaadiso ku dhowaad aan macquul ahayn, sidaas darteed waa inaad tuurto warshadda.
Everonia ubax ee guriga guriga ku jiri karaa jilicis ah budada ah, kallana madow iyo cawl. Dagaalka ka soo horjeeda dhacdooyinkaas waxay noqon karaan dareeraha quadris ama dareeraha Bordeaux.
Muuqaalka muuqaalka dhibcaha huruudda ah ee caleenta cagaarsho jiritaanka joogitaanka cudurrada sida tamaandhada yaanyo iyo qajaarka maskaxda. Daaweynta xaaladaha noocaas ah waa wax aan macquul ahayn.
Aragga xanuunka leh ee ubaxa ah had iyo jeer maaha mid saameynaya bakteeriyada ama cayayaanka.. Tani waxay keeni kartaa daryeel aan habooneyn. Haddii ilmuhu bilaabo inuu si dhakhso ah u qalalo, laakiin aan lahayn calaamado kale oo cudurka ah ayaa la arkay, ka dibna, waxay u badan tahay, waxay ka timaaddaa la'aanta qoyaan, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso waraabinta.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aan ku dhaafin waraabinta - haddii biyo badani aad iyo aad u badan, bilowga ayaa bilaabi doona kallana.
Waa maxay sababta ubaxu?
Beeralayda khibrad leh waxay yiraahdaan in begonia bilaabmaa ubax marka jirida ugu weyn ay leedahay ugu yaraan 5 siddeed. Haddii dhirta la iibsaday ay yar tahay, laakiin blooms, ka dibna, waxay u badan tahay, kiciyaha koboc dhaqameed ayaa la isticmaalay, taas oo ah, ubaxku waa mid caan ah oo soo noqnoqda oo soo noqnoqda oo keliya marka dhirta ay gaadho baahida da'daan.
Haddii ubaxku had iyo goor ku dhaco hooska, ka dibna tani waa sababta kale ee maqnaanshaha ubaxa ee begonias. Waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo maalinta iftiinka, laakiin iska ilaali qoraxda tooska ah.
Hawada qallalan ee hareeraha begonias waxay u baahan tahay in la qoyo. Waxaad ku xiran kartaa shukumaan qoyan (radiator) ama tuubbo biyo ah oo ku xiga ubaxa.
Heerkulka ugu fiican ee xagaaga waa 20-25 digrii, xilliga qaboobaha ah 15. Heerkulka heerkulka sarreeya, qoob-ka-soo-saarka geedka gala xaalad walaac leh taas oo ubax aan macquul ahayn. Qolka loogu talagalay warshad waa in la doortaa microclimate joogto ah.
Bannaanka ama bacriminta xad-dhaafka ah.
Haddii fitamiinadu aanay ku filnayn, markaa waxaad u baahan tahay inaad beerista cusub ku badasho.
Bacriminta, waxaad u baahan tahay inaad u hoggaansanto qiyaasta, haddii kale waxaad ku gubi kartaa xididada ama u rogeysaa awoodda warshadda si ay u koraan caleemaha caleenta.
Cayayaanka waxay ka qaadaan dhammaan dhirta tamarta si ay u bararaan. Waqti ka waqti waxaa lagama maarmaan ah in la baadho dhirta iyaga oo joogitaankooda iyo, haddii ay lagama maarmaan tahay, ula dhaqmaan hab gaar ah.
Waxay ahayd hawl fudud oo lagu daryeeli karo ubax sanadka oo dhan wareega isha lagu hayo ubaxiisa. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad bixiso dareen yar oo raac xeerarka.
Wixii khabiir ah ee dhirta quruxda badan leh, waxaan diyaarinnay walxo faa'iido leh oo ku saabsan noocyada kala duwan ee ubaxyada caanaha sida Elatior. Maqaalkeena waxaad baran doontaa sida loo faafiyo dhirta, iyo sidoo kale nooca daryeelka uu u baahan yahay.
Cudurada suurtagalka ah ee beerka ee bakaylaha iyo daaweyntooda
Digaagga leh baalal qurux badan iyo dabeecad wanaagsan oo wanaagsan - jilbaha Dwarf Cochinchin
Waa maxay cananaaska, faa'iidada iyo isticmaalka dhirta
Quruxda madow-fruited ka yimid Ukraine - sharaxaad of kala duwan ee baradho "Darkie"
Sida dhirta kale oo badan, parsnip ayaa muddo dheer caan ku ahaa faa'iido iyo xitaa bogsiinta guryaha. Tani waxay keentay joogitaanka habab badan oo diyaarintiisa ah. Cuntooyinka xayawaanku waxay daneynayaan dadka dareenka wadnaha, xididdada dhiigga iyo xubnaha unugyada dheef-shiidka. Intaa waxa dheer, warshad qaas ah waxay u dhaqantaa sida duriinka oo ah kaaliyaha koowaad ee colic, iyo dadka qaar ayaa inta badan isticmaala xitaa si looga hortago xiiritaanka. Read More
Kala duwanaanta canabka "Helios"
Carnation travyanka: sharaxaad, beeritaanka iyo daryeelka, isticmaalaan naqshada muuqaalka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Guri, guri 2019